लोकसेवा विशेषः नेपालको प्रशासनिक संरचना जनमैत्री बनाउन के कस्ता सुधार आवश्यक छ ? « Nijamati Khabar
प्रश्न १. नेपालको प्रशासनिक संरचना जनमैत्री बनाउन के कस्ता सुधार आवश्यक ठान्नु हुन्छ ? व्याख्या गर्नुहोस् – (१०)
नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । प्रशासनले जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ यो नै उसको पहिलो कर्तव्य हो । नेपालको प्रशासनिक संरचना अपेक्षित जनमैत्री नभएको गुनासाहरु छन् । अतः नेपालको प्रशासनिक संरचना जनमैत्री बनाउन निम्न सुधार आवश्यक भएको ठान्दछु ।
(क) संगठनको पुनसंरचना:
(ख) आवश्यक्तामा आधारित पद र कार्य जिम्मेवारी:
(घ) क्षमता अभिवृद्धि:
(ङ) नागरिक संलग्नता:
सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा वितरणमा नागरिक संलग्नताले सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनुका साथै नागरिककै Ownership समेत बढ्दछ । जस्तो: औषधी वितरण, चामल वितरण, प्रकोपको समयमा राहत वितरण, खोप सेवामा संलग्नता, वन संरक्षण, सरसफाई, विकास निर्माणमा संलग्नता ।
(च) नागरिक मूल्याङ्कन प्रणाली:
कर्मचारीले गरेका कार्यको मुल्याङ्कन प्रणालीमा सेवाग्राहीको भूमिका अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । जस्तो: Public Report Card, Client Survey आदि । यसबाट कर्मचारीलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन कर लाग्दछ ।
(छ) प्रोत्साहन प्रणाली:
संरचना बीचमा Communication Networking कायम गरी समन्वयात्मक ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणका कार्य गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । यसबाट सेवा प्रभावकारिता बढ्नुका साथै Resource पनि कम खर्च हुन्छ ।
(झ) स्थानीय तहमा हस्तान्तरण:
प्रशासनिक संरचनामा गरिने उपरोक्त सुधारमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री (People Friendly) बनाउन मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।